सागको तयारी सकियो: अब के बाँकी ? « Himal Post | Online News Revolution
सागको तयारी सकियो: अब के बाँकी ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १३ मंसिर ०७:०२
काठमाडौं । मंसिर १५ गतेदेखि हुने १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को सम्पूर्ण तयारी लगभग पूरा भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोको जानकारी दिए ।
सदस्यसचिव सिलवालले पोखरा रङगशालाको दर्शक क्षमता पहिले १० हजारको मात्र गर्ने भनिएकोमा अब १३ हजारमा वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
पोखरा रङगशालाको मैदान पनि पूर्ण रुपमा तयार छ । ट्रयाक एन्ड फिल्डको काम पनि सकिसकेको छ । जहाँ खेलाडीहरुले अभ्यास पनि सुरु गरिसके– उनले भने । सदस्यसचिव सिलवालले शुक्रबार साँझ ५ बजे दशरथ रंगशालामा उद्घाटनको ग्राण्ड रिहर्सल हुने पनि बताएका छन् ।
प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले सागमा सुरक्षा व्यवस्था कडा र चुस्त हुनेमा सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे । साग सुरक्षा कमिटीका संयोजक खनालले भने– ‘सागमा अवाञ्छनीय गतिविधि हुन दिने छैनौँ ।
सागलाई सुरक्षित रुपमा अवतरण गर्न भिभिआइपी, भिआईपी, अतिथि, खेलाडी, पदाधिकारी, रेफ्री, मिडिया र दर्शकको सुरक्षा व्यवस्थामा रत्तिभर कमी हुने छैन । विदेशी पाहुनाका लागि सुरक्षा अझ चुस्त गरिनेछ ।
दशरथ रङ्गशाला वरिपरिका सवारी मार्गमा वानवे लागू गरिनेछ । उद्घाटन दिन रिङरोडभित्र विजोड र समापनमा जोड नम्बरका सवारी साधन मात्र चलाउन पाउने नियम लागू गरिनेछ । दर्शकका लागि पार्किङ स्थल टुँडिखेलमा तोकिएको छ ।
सो स्थानमा पार्किङ गर्न काठमाडौँ मल अगाडिको ढोका प्रयोग हुनेछ । रङ्गशाला भित्र भिभिआइपिको पार्किङ हुनेछ ।
इसेवाका प्रतिनिधि रोशन लामिछानले दशरथ रंगशलामा हुने समूह चरणका फुटबल खेल हेर्न साधारण पारापिटमा पाँच सय र भिआइपी पारािपटमा एक हजार रुपैयाँको टिकट तोकिएको जानकारी दिए । यसैगरी क्रिकेटको टिकट विक्रीको अधिकार भने नेपालयसँग छ ।
क्रिकेटमा नेपालको खेल हुँदा पाँच सय र अन्य देशबीच खेल हुँदा दुई सय रुपैयाँ टिकट मूल्य तोकिएको छ ।